Ulwandle luchaza eli Sixeko esiChuculweyo nesiBheno
I-Halifax, indawo enkulu edolophini e-Atlantic Canada, iyinkunzi yephondo laseNova Scotia . Ihlala phakathi kwiphondo lase-Nova Scotia ngasempuma kwaye liloluchweba olubalulekileyo olujongene nolunye lweelunxweme eziqhelekileyo zehlabathi. Kuyiqhinga lobukhosi ukususela ekusekeni kwalo kwesi sizathu kwaye sibizwa ngokuthi "uMphathi weMntla."
Abathandi bemvelo baya kufumana amabhantshi enxweme, igadidi ezintle, kunye nokuhamba, ukuloba, kunye nokuloba.
Ii-Urban ziyakonwabela i-symphony, ihlala kwindawo yokudlala, iifriji zezobugcisa, kunye neemyuziyamu, kunye nobomi obubusuku obunobomi obubandakanya i-brewpubs kunye nesimo esikhulu sokutya. I-Halifax ngumzi onokuthengelayo onika umxube wembali yaseCanada kunye nokuphila kwangoku, kunye nefuthe eliqhubekayo elwandle.
Indawo yokuqala yaseBrithani eyaba yiHalfax yaqala ngo-1749 ngokufika kwabangama-2 500 abavela eBrithani. I-harbor kunye nesithembiso sokuloba i-cod fishing Ukuhlaliswa kwabizwa ngokuba nguGeorge Dunk, u-Earl waseHalfax, owayengumsekeli oyintloko wokuhlala. I-Halifax yayisisiseko somsebenzi waseBrithani ngexesha leNguqulelo yaseMelika kunye nendawo eya kubaMerika abathembekileyo eBrithani abachasene neNguqulelo. Indawo yasekuhlaleni yaseHalfax yayivimbela ukukhula kwayo, kodwa iMfazwe Yehlabathi I yabuyisela kwakhona ukugqwesa kwakhona njengendlela yokuthumela eYurophu.
I-Citadel iyintaba ejongene nechweba elivela kwisiqalo saloo dolophu lalixabiseke ngombono walo we-harbor kunye neentlambo ezungezile kwaye kwasekuqaleni isakhiwo sezakhiwo, okokuqala ukuba yindlu yokulondoloza ukhuni. Inqaba yokugqibela yokwakhiwa apho, i-Fort George, imele ibe isikhumbuzo sokubaluleka kwembali kule ndawo ephambili.
Kubizwa ngoku kuthiwa yiCitadel Hill kwaye kuyindawo yesiganeko yesizwe esichaphazelayo, iindwendwe zomoya, ukuguqula umthumeli kunye nokuhamba ngaphakathi kwinqaba.
Izibalo kunye noRhulumente
I-Halifax iquka iikhilomitha ezili-5,490.28 zeekhilomitha okanye ii-2,119.81 iekhilomitha ezili-square. Ubalo balo njengabalingiswa babantu baseKhanada ngo-2011 babengu-390,095.
Ibhunga leNgingqi laseHalfax lilungu elilawulayo kunye nelomthetho kuMasipala wesiFunda saseHalfax. Ibhunga leNgingqi ye-Halifax lenziwe ngabameli abakhethiweyo abayi-17: i-dolophu namabhansela kamasipala angama-16.
Ngaphandle kweCitadel, iHalfax inikezela umdla othakazelisayo. Omnye ongazilahlekanga iMyuziyam yaseMaritime yaseAtlantiki, equka izinto zokufakelwa kwi-Titanic. Amagumbi amaxhoba angama-121 ale nhlekelele ngo-1912 angcwatyelwa e-Halifax e-Fairview Lawn Cemetery. Ezinye iziqhamo zeHalfax ziquka:
I-Pier 21 - iMyuziyam yaseKhanada yeNgingqi
Iphondo leNdlu, iNdibano yeSigqeba saseNova Scotia
Igalari yezobugcisa yaseNova Scotia
ITrans Canada Trail
Isimo sezulu se Halifax
Isimo sezulu sase Halifax sichasene kakhulu nolwandle. I-Winters ibumnene kwaye iifudum zipholile. I-Halifax inamandla kwaye iphosa, inombhobho kwiintsuku ezingama-100 zonyaka, ingakumbi entwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo.
I-Winters eHalfax iyingqinelana kodwa imanzi nemvula kunye nekhephu. Umgangatho ophezulu wokushisa ngoJanuwari ngowesi-2 degrees Celsius, okanye i-29 degrees Fahrenheit. I-Spring ifika ngokukhawuleza kwaye ekugqibeleni ifike ngo-Ephreli, ivelisa imvula kunye nenkungu.
Ingqungquthela yaseHalfax imfutshane kodwa inhle. NgoJulayi, izinga lokushisa eliphezulu lilingama-23 degrees Celsius, okanye ii-degrees ezingama-74 zamaFahrenheit. Ngasekupheleni kwehlobo okanye ukuwa kwangaphambili, iHalfax inokuva umsila wokuphela kwesiphepho okanye isiphepho esiphezulu.
Indlela Ukhetho lwe-Federal eCanada lisebenza ngayo
Imimiselo yabaseKhanada Ukuzisa utywala eCanada
Biography kaJacques Cartier
Shintsha idilesi yakho kunye ne-Arhente yeRevenue Revenue Agency
Yintoni iSebe lePalamente eCanada?
Bhala kwiNkulumbuso yaseBrithani Columbia
Nantsi idilesi yokubhalela uSanta ukuba uqiniseke ukuba ufumana impendulo
I-T4A (i-OAS) Iintlawulo zeRhafu zeeRhafu zeNgeniso zeCanada
Yintoni iGold White? (Ukwakhiwa kweMikhali)
Iimpawu ezi-3 eziphezulu zokuThabisa
Unako Ukusela Amanzi Amanzi?
I-albhamu ephezulu ye-20 yohlobo lwexesha lonke
Iphrofayili / i-Biography kaKirsten Gillibrand, uSenator wase-US (D-NY)
UJohn Alden Jr: Umfanekiso kwiimvavanyo ze-Salem Witch
'Iphupha lobusuku beMidsummer' - Isikhokelo soFundo
Imibala yoVavanyo lweFlamme - Igalari yezithombe
Indlela Yokugqoka Iinwele Zakho Ukukhwela Umzobo
I-Tapinosis (Igama elibizwa ngegama-Ukubiza)
IiPapa zamaRoma Katolika weFifth Century
Iimpawu zeMpahla engekho kuSebenzi
IsiNgesi esingavumelekanga sesiLatini - iNolo
Yintoni ifomu ye-Clairalience ye-ESP?
Yiyiphi iklasi yeChemistry eyona nzima kakhulu?
Iintlobo ezilishumi eziqhelekileyo zemithi e-United States
ILogo Design and Creating Graphics With Shapes Basic
Ixesha elide kunene-Ukufa kweePlaffs kwi-PGA Tour
Iipatheni zokufanisana kunye nokwahlukana kweSpanish nesiNgesi
Imisebenzi yeMaritime - uMphathi we-Marina okanye iDock Master
Ii-Helicoprion Facts and Figures